Hetsika manohitra ny fanorisorenana an-dalambe ao Trinité & Tobago: Fotoana indrindra izao hampianarana ny lehilahy hanao ny tsara kokoa” · Global Voices teny Malagasy
Hetsika manohitra ny fanorisorenana an-dalambe ao Trinité & Tobago: Fotoana indrindra izao hampianarana ny lehilahy hanao ny tsara kokoa”
'Tsy misy valisoa azo amin'ny fijerena ara-nofo tsy niriana...'
Voadika ny 07 Febroary 2020 5:36 GMT
Mpanao fihetsiketsehana mampiseho sora-baventy miteny ireo zava-niainany amin'ny mahavehivavy azy ireo tamin'ny 12 febroary 2016, teo ivelan'ny Lapan'ny Tanànan'i Port of Spain, Trinite sy Tobago. Saripikan'i Janine Mendes-Franco, nahazoana alalana.
Tranga mahazatra eo anivon'ny ankamaroan'ny fiarahamonina Karaibeana ny fanabantiana vehivavy — sy ny fiantraika ratsy amin'ny fanavakavahana sy ny fanorisorenana ara-nofo izay tonga hatramin'ny fanafihana ara-pananahana, herisetra amin'ny vehivavy ary famonoana olona mihitsy aza.
Na izany filazana be marenin'ny parlemantera ao Jamaika momba ny fanolanana sy ny nono, ny toe-tsain‘ny ao amin'ny faritra nirongatra “manome tsiny ny niharam-boina“, ny fironany mankany amin'ny “kolontsain'ny fanolanana”, na ireo tantara an-jatony momba ny herisetra ara-nofo izay nalaza herintaona talohan’ny hetsika #MeToo, dia tsy hisalasalana fa manana olana hovahana ny Karaiba raha resaka fomba fijery sy fikarakarana ny vehivavy.
Nanomboka nanao fanentanana ara-panabeazana momba ny fanorisorenana an-dalambe tao Trinite sy Tobago ny Vaomieran'ny Toekarena ao amin'ny Firenena Mikambana ho an'ny Amerika Latina sy Karaiba (ECLAC) amin'ny teny Anglisy, ny hitarika fiovana ara-pitondratena no tanjona amin'izany.
Tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny gazety Trinidad and Tobago Express, nilaza ny tompon'andraikitry ny fitantanana ny programa ao amin'ny ECLAC, Amelia Bleeker, fa hahakasika ireo sekoly ambaratonga faharoa miisa 30 manerana ny firenena ny fisantarana andraikitra mba hampianarana ny mpianatra momba ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy.
Manondro ny horikorika (fisiasiahana) ho “vavahadin'ny fandikan-dalàna” mankany amin'ireo endrika herisetra hafa, tahaka ny fanafihana ara-nofo i Bleeker — ary amin'izao fitomboan'isan'ireo Venezoeliana mpitady fialokalofana ao amin'ny firenena izao, ahiana ho tandindonin-doza ihany koa ny vehivavy mpifindra monina, satria maro ireo lehilahy eo an-toerana no mahasahy milaza fa manankevitra hiala voly ara-nofo ho takalon'ny vola.
Nifanojo tamin'ny fankalazana isan-taona ny 16 Andron'ny Fikatrohana anoherana ny Herisetra amin'ny Vehivavy — hetsika iraisam-pirenena miresaka momba ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy sy ny tovovavy izay atao manomboka ny 25 Novambra (Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Fanafoanana ny Herisetra mianjady amin'ny Vehivavy) hatramin'ny 10 Desambra (andron'ny zon'olombelona) ny filazana ny fisantarana andraikitra ataon'ny ECLAC ity.
Misy ihany koa mazava ho azy ireo ezaka hafa hanintonana ny saina manoloana ny olana, tahaka ny WomenSpeakProject, izay manome sehatra antserasera ho an'ny vehivavy mba hizara ny tantaran'izy ireo. Na izany aza, antenaina fa hisy fiantraikany lehibe ny tetikasa ECLAC, izay manana fitaovana maro ampelalanana — indrindra raha resaka fanabeazana ny lehilahy.
“Raha leferina ny fanorisorenana an-dalambe, dia hiteraka toe-tsaina manimba ny vehivavy ka manangana tontolo mampiroborobo ireo karazana herisetra hafa mianjady amin'ny vehivavy”, hoy i Bleeker nanazava tamin'ny tafatafa, nampiany koa fa mampiseho ireo fikarohana vao haingana momba ny herisetra ataon'ny vady na sakaiza fa vehivavy na tovovavy iray ao anatin'ny telo no niharan'ny fanararaotana ataon'ny vady na sakaizan'izy ireo, ka 29 isanjato amin'izany dia fitambaran'ny herisetra ara-batana sy ara-nofo.
Ao Jamaika ohatra, nanamarika ireo Tatira isan-karazany ataon'i Etazonia amin'ny isa-pirenena fa mifikitra amin'ny alalan'ny “fenitra ara-tsosialy sy ara-kolontsaina” ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ary “vehivavy maro no misalasala hiaiky ny fisiana na hitory ireo fitondrantena mihoa-pefy”, raha nanamarika kosa ny tatitra navoakan'ny Amnesty International tamin'ny taona 2013 fa “mbola olana mitoetra ny herisetra ara-nofo mihatra amin'ny vehivavy sy ny tovovavy.”
Any Barbados, nanondro ny tatitra iray nandrakitra an-tsarintany ireo olana goavana manodidina ny herisetra an-tokantrano ao amin'ny firenena fa miaina fanjakazakan'ny fananahana aloha loatra ireo ankizy ao Karaiba araka ny antontanisa.
Tamin'ireo vono olona miisa 494 noraketin'ny tranonkala TTCrime tamin'ny taona 2017, izay nandrakitra heloka bevava feno herisetra tao Trinite sy Tobago, vehivavy ny 52 tamin'ireo niharam-boina; ary 43 tamin'ireo maty no noheverina fa vokatry ny herisetra an-tokantrano.
Raha mety manome ny habetsaky ny filam-baniny an-dalambe araka ny ankeviny ireo kaonty antserasera miresaka izany, dia ny firaketana arakisa mihitsy no tsy misy. Ny zavamisy manko dia heverina ho ao anatin'ny fenitra ara-tsosialy ity karazana fihoaram-pefy ity ary ny loza — misy ireo lehilahy (sy vehivavy) mihevitra izany ho valisoa —. Noho io fankatoavana ara-piarahamonina mieli-patrana io mihitsy no no nahatonga an'i Bleeker hiteny fa hiatrika fahasarotana ny ekipan'i ECLAC amin'ny fanovana ny fomba fitantarana andalambe mampihevitra ny fanelingelenana an-dalambe ho fanalana andro tsy mandratra ho lasa hoe olana misy fiantraikany mivantana amin'ny fiarovana ny vehivavy sy ny zon'olombelona io fanorisorenana an-dalambe io.
Tsara fandray ilay vaovao ny mpisera media sosialy tamin'ny ankamaroany. Tao amin'ny randram-baovaon'ny vondrona Facebook Breaking News T&T, no nitenenan'i Renee Camps-Campins hoe:
[…] Mankarary sy mankaleo ahy ny itenenana ny vehivavy hoe ahoana no atao IDIFIANA an'izatsy na izaroa. Mila ampianarina ny lehilahy hoe tsy mety io. Mila ampianarina hoe tsy azo ekena io fihetsika avy amin-dry zareo io Ampianarina fa afaka ary tokony hanao ny tsaratsara kokoa ry zareo, ary TSY TOKONY HANAO IZANY fotsiny!!!!!!! Fihetsika mankaloiloy izay tokony atsahatry ny fiarahamonina ny mihevitra azy ho fenitra!
Mitovy hevitra amin'izany i Anessa Douglas, izay efa tratran'ny horikorika tahaka ny ankamaron'ny vehivavy Trinbagoniana rahateo:
Tena mankadoa tokoa ity kolontsaina ratsy ankatoavina ity ka raha vao mitsipaka izany izahay vehivavy dia lazaina ho zaza tsy tonga volana, arahana fanehoan-kevitra fa tsy mahay mandray dokadoka izahay. […]
Tsy misy valisoa azo amin'ny fijerena ara-nofo tsy niriana, mahatonga anao hahatsiaro ho voaolana sy tsy nohajaina izany ary lava loatra ihany koa ny lisitry ny zavatra tokony ataon'ny vehivavy idifiana izany ary fotoana indrindra izao ampianarana ny lehilahy hanao ny tsaratsara kokoa..
Mahatalanjona fa mahita ilay fisantarana andraikitra ho tsy dia ilaina ny mpisera Facebook, Gemma Robinson:
Tahaka ny paranoïa izao amiko. Izao aho tsy manana fialantsiny ho an'ny olona manao fihetsika dala amiko. Ny mahasorena ahy dia ireo feminista tsy mitombina loatra tonga miteny anay ny hifehezana ny fiarahamonintsika. Miteny aminareo amin'ny maha-vehivavy ahy aho, tsy matahotra aho eny an'araben'i T+T na dia anaovana horikorika aza.
Mikiry i Bleeker, na izany aza, fa ny kitay telo an-dalana, ny tsi-fisaziana ary ny fahanginana no mahatonga ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ho iray amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona be mpitranga indrindra, milaza fa vehivavy iray amin'ny telo maneratany no mizaka herisetra ara-batana na ara-pananahana teo amin'ny fiainany amin'izao fotoana izao.
Tsy resaka fanentanana handrisihana ny vehivavy hihaika ny fanorisorenana an-dalambe izy ity … fa resaka ifanabeazan'ny lehilahy sy ny zazalahy mba tsy hahatonga tahotra ny vehivavy sy ny zazavavy ary hamela azy ireo hisitraka zo mitovy eny amin'ny toerana ankalamanjana.
Hatramin'izao aloha, ao amin'ny Facebook, namoaka lahatsary fijoroana vavolombelona misy angovo ny ECLAC, sy endrika afisy vonona hanaovana fanentanana, haranty any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa sy ny tobin'ny polisy manerana ny firenena ireo endrika afisy ireo.